यसरी झपारे रोहितले प्रचण्डलाई | नेपाल इटाली डट कम
यसरी झपारे रोहितले प्रचण्डलाई
राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भन्ने कुरामा सहमति खोज्न भक्तपुर पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले रोचक तर्क गरेर फर्काइदिएका छन्। बिजुक्छेले सेनापति फाल्ने वा राख्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई प्रचण्डले उल्लङ्घन गरेको र संविधान उल्लङ्घन पनि प्रचण्डबाटै भएको तर्क दिए। बिजुक्छेको तर्क सुनेर गम्भीर भएका प्रचण्ड पछि कुराकानी गरौँला भनेर बाहिरिएका थिए।
कात्तिक २८ गते बिजुक्छे निवासमा पुगेका प्रचण्डले नयाँ तर्कको सामना गर्न खोजे, तर सकेनन्। प्रधानसेनापतिलाई नियुक्ति वा कारबाही गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकार मिचेको आरोप प्रचण्डलाई लगाएका बिजुक्छेले बजेट ल्याउन नदिएर देशलाई कहाँ लैजान खोजेको? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रचण्ड नाजवाफ भएका थिए।
‘राष्ट्रपतिले गर्ने काम तपाईंले गर्नुभो, सेनापति निकाल्ने कि हटाउने भन्ने कुरा राष्ट्रपतिको अधिकारक्षेत्रको हो। तपाईंले मिचिदिनुभयो। त्यसकारण तपाईंको यो कुरालाई समर्थन गर्न म सक्दिनँ,’ बिजुक्छेले प्रचण्डलाई भने। प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्योत। नागरिक सर्वोच्चताको विषयमा तपाईं–हामी एकै ठाउँमा आउनुपर्योो।’
प्रचण्डले सेनापति प्रकरणमा आफ्नो प्राविधिक त्रुटि भएको हुन सक्ने तर सारमा राष्ट्रपतिले गलत कदम चालेकोचाहिँ सही भएको तर्क गरेका थिए। भेटका बारेमा घटना र विचारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष बिजुक्छेले भनेका छन्, ‘प्रचण्डजीकै तर्कका आधारमा मैले राष्ट्रपतिको विरोध गर्न सकिनँ। किनभने त्यो जायज कुरै होइन। बजेट पारित गर्नुस्, अनि सरकार ढाल्नुस् भनेको छु। प्रचण्डजीले पनि छलफल गरौँ भन्नुभएको छ।’
मङ्सिर ५ गतेपछि हुने आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर बिजुक्छेले प्रचण्डलाई सोधेका थिए। बिजुक्छेका अनुसार प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘शान्तिपूर्ण हुन्छ, तर अहिलेको भन्दा सशक्त। तपाईंहरू पनि आउनुपर्छ।’ तर, बिजुक्छेको जवाफ थियो, ‘सँगै आन्दोनमा जान एजेन्डाहरू पनि सँगसँगै राख्नुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय निकायको पुनर्स्थापना (वा गठन) र जोताहा किसानलाई जमिन दिनुपर्ने माग पनि राख्नुस् भन्ोको छु। यो मुद्दाका लागि आन्दोलनमा जान आपत्ति छैन।’ तर, राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा चाहिँ आन्दोलनमा नजाने बिजुक्छेले स्पष्ट गरेका थिए।
बिजुक्छेले दलहरूबीच्ा सहमति हुन नसके राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन र संसदीय चुनाव नै संवैधानिक विकल्प हुने कुरा प्रचण्डलाई दोहोर्यािए। ‘मलाई यसबारेका प्रचण्डजीले सोध्नुभयो,’ बिजुक्छेले भने, ‘यो कुरामा मेरो चाहना र इच्छा हैन, बाध्यात्मक विकल्प हुनसक्छ भनेको मात्र हुँ। बरु तपाईंहरू छिटो–छिटो सहमतिका लागि वार्ता गर्नुस् भनिदिएँ।’
यसैबीच राष्ट्रपतिको कदमका बारेमा एउटै धारणा बनाएको नेकपा एकीकृतले पनि माओवादी नेतृत्वलाई आलोचना गरेको छ। ‘सरकारमा जानका लागि हामीलाई पनि खुडि्कलो बनाउने?’ भन्दै एकीकृतका नेताहरू अस्ति सोमबार माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईमाथि जाइलागेका थिए
« स्वायनफ्लुको औषधि पत्ता लाग्यो
कोशी व्यारेजमा एक जनाको शव वरामद »